မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်း၌ ကုန်တင်ယာဉ်နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ပြီး မီးလောင် ယာဉ်မေ?? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၈
ကရင် ပြည်နယ် မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ကုန်တင်ယာဉ် ကြီးနှစ်စီး မျက်နှာချင်ဆိုင်တိုက်မိ ပြီး မီးလောင်မှုဖြစ်ကာ ယာဉ်မောင်း နှစ်ဦးနှင့်ယာဉ်နောက်လိုက်တစ်ဦးတို့ သေဆုံး၍ အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ခုနစ်နာရီခန့်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြဝတီ-ကော့က ရိတ်အမြန်လမ်းပေါ်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၃ နာရီက မြဝတီဘက်မှ ကော့ကရိတ်ဘက်သို့ Rosny တံဆိပ်ပါ ရောင်စုံမှုတ်ဆေးဘူးများ အပြည့်တင်ဆောင်လာသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာ မွေမြို့နယ်နေ ယာဉ်မောင်း အောင် မြင့်မြတ်(၃၈)နှစ် မောင်းနှင်လာသည့်ယာဉ်အမှတ် 3M/—- VOLVO အမျိုးအစားတွဲကားဘီး ၂ဝ ယာဉ်နှင့် ကော့ကရိတ်ဘက်မှ မြဝတီဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း (စုံစမ်းဆဲ)မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်အမှတ်(စုံစမ်းဆဲ)တွဲကားတို့ အဆိုပါလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၆၁) အနီးကွင်းကလေးတံတားထိပ် အရောက်တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်မိပြီး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် အောင်မြင့်မြတ် မောင်းနှင်လာသည့် တွဲကားကြီးမှာ တုံးလုံးလဲသွားကာ ယာဉ်နှစ်စီးစလုံး မီး လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ရာနှင့် ပေ ၅ဝ အကွာရှိ လမ်းလုံခြုံ ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သော KNU တပ် မဟာ (၆) မှ အလျား ၁၅ ပေ အနံ ၁ဝ ပေခန့်ရှိ မြေစိုက်တဲတစ်လုံး ကိုပါ မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကာ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ငွေကျပ်သိန်းတစ် ထောင်ခန့်ရှိကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်း နှစ်ဦးနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ယာဉ်နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်မိပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ် ကြောင်း သတင်းရတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရယ် မြဝတီခရိုင်က မီးသတ်ကားလေးစီးနဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရယ်၊ လူမှုကယ်ဆယ် ရေးအဖွဲ့က လူနာတင်ယာဉ်နဲ့ အဖွဲ့သားတွေရယ် ချက်ချင်းပဲ အခင်း ဖြစ်နေရာကို သွားရောက်ပြီး မီး လောင်မှုကို အရင်ငြှိမ်းသတ်ပါ တယ်။ ပြီးတော့ လမ်းပေါ်မှာ ကန့်လန့်ခံပြီး တုံးလုံးလဲနေတဲ့ ယာဉ်နဲ့ ကားပေါ်ပါ မီးလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို မြေထိုးထွန် စက်တွေနဲ့ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါတယ်။ ဒီလမ်းမကြီးက ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် မော်တော်ယာဉ်တွေ အဆက်မပြတ်သွားလာနေတာ ကြောင့် ခရီးသွားယာဉ်တွေနဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ မှု ကြာရှည်မဖြစ်စေရေးအတွက် အားချင်းဆောက်ရွက်ပေးနေပါတယ်”ဟု မြဝတီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ရဲမှူးကျော်သူရည်က ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ VOLVO အမျိုးအစားယာဉ်မောင်း အောင်မြင့်မြတ်(သေဆုံး)နှင့် တွဲကား ယာဉ်မောင်း(သေဆုံး)၊ ယာဉ်အမှတ်နှင့်အမည်(စုံစမ်းဆဲ)တို့ နှစ်ဦးအား သင်္ဃန်းညီနောင်မြို့မ ရဲစခန်းမှ ယာဉ်(ပ) ၂၆/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃ဝ၄ (က)/ ၂၈၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထား ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုအား တာဝန်ရှိသူများမှ လမ်းပိတ်ဆို့မှုမဖြစ် စေရေးအတွက် အားချင်းဆောင် ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း ယင်းနေ့ နံ နက် ၃ နာရီမှ နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲအထိ ခုနစ်နာရီခန့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖိအားများမှ ရုန်းထွက်ရတော့မည်ဟု ကိုဗက်အား ဘက်ဘယ်သတိပေး၊ ၂ဝ၁၇ တွင် ဆန်ချို ကို ခေါ်ယူနိုင်မည?
ABSDFင်္ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်
အခြေခံပညာ မူလတန်းပြဆရာ ငါးသောင်း လိုအပ်နေမှု ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ ပညာသင်နှစ်တွင် အပြီး ခန့်ထားပေးသွားမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ နှစ်ရက်ဖြေဆိုပြီးချိန်တွင် လာရောက်ဖြေဆိုရန် ပျက်ကွက်သူ ၄၇၇ဝဝ ကျေ?
ရုရှားက မြန်မာသို့ Yak-130 တိုက်လေယာဉ် ခြောက်စင်း ပေးပို့မည်
မြန်မာဘက်မှ လုံခြုံရေးအရ ပိတ်ထားခဲ့သည့် ကျင့်စန်းကျော့ဂိတ် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
လူဦးရေ ၇၅ဝဝ ခန့်ရှိသော ကျေးရွာငါးရွာကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးတည်း အုပ်ချုပ်နေရသဖြင့်ြ??